Nidaamka Tamarta wuxuu soo bandhigayaa noocyadiisa kala duwan ee ku hadla ciyaaraha | War gadget
Oo ay weheliso noocyadeeda cusub ee maqalka ciyaarta, Sistem Tamarta ayaa nooga tagi doonta waxyaabo cusub oo badan oo ku saabsan soo bandhigiddeeda munaasabadda IFA 2019. Sumadda caanka ah ee caanka ah sidoo kale wuxuu nooga tagayaa noocyo cusub oo ku hadla. In kasta oo ay tahay kala duwanaansho sidoo kale ilaalinaysa waxyaabo badan oo loogu talagalay ciyaaraha, waa arrin ay tahay in lagu xisaabtamo arrintan marka la eego noocyada alaabada.
Sistem-ka Tamarta wuxuu sheegayaa in kuwan hadlaya ay yihiin kuwo loogu talagalay sii khibrada ugu fiican ee ciyaarta adeegsadayaasha. Marka ballanqaadka calaamaddu inuu ku yeesho joogitaan ballaadhan qaybtan suuqyadu way caddahay. Sidaa darteed, waxay nooga tegayaan laba nooc oo kuhadal ah kiiskan, oo aan horeyba u haysannay xogta ugu muhiimsan.
1 Ciyaaraha Ciyaaraha 'ESG 5 Thunder', dareemo baaska oo weynee khibradaada ciyaaraha
2 Ciyaaraha Ciyaaraha 'ESG 3 Immersive', dhammaan awoodda codka dhawaaqa
Ciyaaraha Ciyaaraha 'ESG 5 Thunder', dareemo baaska oo weynee khibradaada ciyaaraha
Nooca Ciyaaraha Ciyaaraha 'ESG 5 Thunder' waa nidaam ka mid ah 2.1W awoodda ugu sarreysa 100 ku hadla qalabka dhawaaqa (50 W RMS). Waxay sidoo kale leedahay laydhadh RGB ah, oo loogu talagalay inay bixiso khibrad gebi ahaanba ciyaarta ah. Loogu talagalay in la kordhiyo khibraddan ciyaaraha.
Nidaamkan dhawaaqa wuxuu ka kooban yahay subwoofer-ka si loo xoojiyo baasaska, taas oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu is dhex galiyo ciyaarta. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale kujirtaa bayaan-celinta iyo laba hadla oo buuxa, oo lagu daray baas gacmeed iyo barbaraha seddexleyda ah. Tani waa wax kuu oggolaanaya inaad nidaamiso habka ay ku hadlayaan u soo saari doonaan cod kasta markii la isticmaalayo.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, Afhayeenka Ciyaaraha 'ESG 5 Thunder' wuxuu bixiyaa fursado badan. Tan iyo markii aan u isticmaali karno fiilo la'aan. joogitaanka fasalka Bluetooth 5.0 I. laakiin sidoo kale waa suurtagal in lagu xiro fiilo. Waad ku mahadsantahay labadeeda shey ee dhijitaalka ah: Wax-soo-saarka Digital Optical iyo HDMI ARC iyo waliba 3,5 mm mini Jack jack analog. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa suurtogalnimada in lagu ciyaaro muusig lagu xasuusto xusuusta USB-ga ah
Ciyaaraha Ciyaaraha 'ESG 3 Immersive', dhammaan awoodda codka dhawaaqa
Ciyaaraha Ciyaaraha 'ESG 3 Immersive' waxay ku saabsan yihiin Nidaamka codka ah ee rikoodhka ah ee 2.0 oo leh nalalka RGB ee lagu dhejiyay, oo loogu talagalay inay bixiso khibrad ciyaar oo dhammaystiran. Xaaladdan oo kale, waa nidaam ka sarreeya dhammaan wixii awood ah oo ay na siin doonto, waayo-aragnimo isticmaale wanaagsan.
Afayeenka wuxuu leeyahay awooda ugu sareysa ee 60W (30W RMS) daqiiqadahaas marka aad u baahan tahay inaad maqasho faahfaahin kasta oo ciyaarta ah si hufan oo macquul ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku dhex jirtaa bass reflex iyo laba kuhadlayaal buuxa, iyo sidoo kale baas iyo seddexleey sedaxle ah, taas oo noo ogolaaneysa inaan nidaamino habka ay kuhadlayaashu u soo saari doonaan cod kasta inta aan isticmaaleyno.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, Afhayeenka Ciyaaraha 'ESG 3 Immersive' wuxuu bixiyaa fursado badan: laga bilaabo hab wireless ah —Bluetooth 5.0 class II— sida kebelka, oo leh aqbasho miniil 3,5 mm ah; waxayna u oggolaaneysaa awoodda lagu ciyaaro muusikada ku keydsan xusuusta USB-ga dibedda.
Labada aaladba waxay leeyihiin laydh hore iyo nal gadaal awood leh oo si toos ah ugu shaqeeya darbiga. Hababkaaga nalka RGB LED waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinkiisa weyn, maaddaama ay ka faa'iideysanayaan midabada kala duwan si loo hagaajiyo jawiga iyo quusitaanka ciyaar kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Nidaamka Tamarta wuxuu soo bandhigayaa noocyo cusub oo kuhadlaya